अचम्मका कुरा – Page2– Interview Nepal
प्रेमिकालाई मध्यरातमा भेट्न गएका यी युवकको भयो यस्तो दुर्दशा !
काठमाडौं , पुस २१ । एक प्रेमी आफ्नी प्रेमीकालाई भेट्न मध्यराती उनको घर पुगेका छन् । तर त्यहाँ जानु नै उनका लागि अभिशाप बनेको छ । युवतीका परिवारले यसको बारेमा थाहा पाएपछि उनीहरुले युवकको कपाल सबै खौरिदिएर बेइजती गरिदिए । यो घटना भारतको मुजफ्फपुरको हो । मदार गाउँकी एक युवतीसँग प्रेम गरेका उक्त युवक प्रेमीकालाई भेट्न साथीहरुसँग मध्यराती गाउँ गएका थिए । तर युवतीको परिवारले उक्त कुरा थाहा पाएपछि उनको कपाल खौरिएर बेइज्जती गरिदिएका हुन् । साथै उक्त युवकलाई पिटेका पनि छन् । उनको कपाल भने आधा मात्रै खौरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा...
अचम्मको परम्पराः बिहे गरेपछि प्रत्येक रात ससुराली जानै पर्ने
काठमाडौं, पुस १८ । यस्तो ठाउँ जहाँ बिहे गरेपछि प्रत्येक रात ससुराली जानै पर्ने, चीनमा एउटा अचम्मको परम्परा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । युनान प्रान्तका मुसो आदिवासीमा प्रचलित यो परम्परामा बिहे गरिसकेपछि पति(पत्नी एकै घरमा बस्दैनन् । अर्थात्, महिलाहरू आफ्नो पतिको घर जाँदैनन्, माइतीमै बस्छन् । पति पनि आफ्नै घरमा । बरु, बिहेपछि पतिहरू आफ्नै पत्नीसँग बस्न वा रात बिताउन हरेक रात ससुराली जान्छन् । आफ्नी श्रीमतीसँग भेट्न हरेक बेलुका ससुराल जाने र विहानै आफ्नो घर फर्किने यो परम्परा अनौठो रहेको छ । अझ विशेष त, ती पति–पत्नीको सम्बन्धमा कुनै आर्थिक लेनदेन पनि हुँदैन । दुईमध्ये यदि कसैलाई चित्त बुझेन भने पनि सम्बन्ध तोड्ने छुट उनीहरूलाई हुन्छ । त्यसैगरी, उनीहरूबाट जन्मिएका बालबच्चा हुर्काउन वा लालनपालन गर्ने जिम्मेवारी बाबुको काँधमा हुँदैन । त्यो काम पनि महिलाले नै गर्छन् । यो आदिव...
Jan12021 by China RegmiNo Comments
नयाँ बर्षको पहिलो दिनः तीन लाख ७१ हजार शिशु जन्मिए
अचम्मका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय, समाचार, समाज
काठमाडौं, पुस १७ । नयाँ बर्ष सन् २०२१ को पहिलो दिन जनवरी १ का दिन संसारभरी तीन लाख ७१ हजार ५०४ जना जन्मिएको युनिसेफले जनाएको छ । “हजारौँ नयाँ सुन्दर बालबालिकाहरुलाई स्वागत गर्न पाइएको छ, यसले हामीलाई रोमान्चित बनाएको छ,” कम्बोडियाका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि फोरुघ फोयौजातले भने । गत बर्ष सन् २०२० सवैका लागि चुनौतिपूर्ण बर्ष बनेको थियो, त्यसमा पनि बालबालिकाहरुका लागि झनै चुनौतीपूर्ण भएको थियो, तथापि कम्बोडियाले कोरोनाभाइरसको महामारीमा राम्रो व्यवस्थापन गरेको पाइयो ।” उनीद्वारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष ९युनिसेफ०ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार कोम्बोडियामा यस बर्षको पहिलो दिन ९७१ जना जन्मिएका हुन् । अरु देशको तुलनामा राम्रो व्यवस्थापन भएको अवस्थालाई निरन्तरता दिन कम्बोडिया सफल हुने पनि उनले आशा व्यक्त गरेका छन् । कम्बोडियामा जन्मिएका बालबालिकाको...
काठमाडौं , पुस १२६ । के तपाईले कहिल्यै पुरुष गर्भवती बनेको खबर सुन्नु भएको छ ? बेलायतमा एउटा अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । आमा सबैले बन्न सक्दैनन् र आमा बन्नु महिलाको लागि विशेष क्षण हो । किनभने उनीहरुको भित्र आफ्नै अंश बढीरहेको हुन्छ । बेलायतका १८ वर्षीय एक पुरुष प्रेग्नेन्ट भएका छन् । उनको कोखमा ४ महिनाको बच्चा बढीरहेको छ । उनको नाम मिके चनेल रहेको छ भने उनी बेलायतको बोस्टन शहरमा बस्छन् । उनको शरीरमा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रहेको छ । जसका कारण उनले गर्भाएधारण गरेका छन् । उनको जन्म पुरुषको रुपमा भएपनि उनको सबै व्यवहार महिलाको जस्तो थियो । तपाईलाई यो सुन्दा र पढ्दा अच्चम लाग्यो होला है । ...
Dec292020 by China RegmiNo Comments
अचम्मका कुरा, समाज
के तपाई कहिल्यै जुत्ता चप्पल बिना कतै जान सक्नु हुन्छ? पक्कै सकिदैन किनकी भुईको चिसो तातो वा खुट्टाले किल्चन सक्ने बस्तुको कारण हामी चप्पल लगाउँछौ । तर भारतको एक गाउँमा भने जूत्ताचप्पल नलगाउँने परम्परा छ । यदि कसैले भुलवश लगाएको पाएमा उनीहरु सजायको भागिदार हुन्छन् । भारतको तमिलनाडुको मदुराईबाट करीब २० किलोमिटरको दूरीमा रहेको एक गाँउमा जुत्ताचप्पल नलगाउने परम्परा छ । कलिमायन नामक यस गाँउमा सयौं र्षदेखि जुत्ताचप्पल लगाउन नपाउने नियम छ । यहाँ जुत्ताचप्पल लगाएको देखेमा स्थानीय रिसाउने र सजाय दिने गर्दछन् । कतिसम्म भने अभिभावक नै साना बालबालिकालाई समेत जूत्ताचप्पल लगाउन मनाही गर्दछन् । जुत्ताचप्पल नलगाउने परम्पराको पछाडि अनौठो कारण छ । खासमा त्यस गाउँमा अपाच्छी नामक देवताको सदियौंदेखि पूजा हुदैं आएको छ । उनीहरु अपाच्छी देवताले नै उनीहरुको रक्षा गर्ने मान्यता राख्दछन् । उनै देवताप्रति...
Dec282020 by China RegmiNo Comments
काठमाडौं, पुस १३ । यी व्यक्ति जसले ६० बर्ष देखि ननुहाई बसेका छन् । यस्तो सुन्दा र पढ्दा भन्ने तपाईंलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, विश्वमा यस्ता व्यक्ति भेटिएका छन् जो ६० बर्ष देखि ननुहाई बसेका छन् । यो प्रसङ्ग इरानको हो । सामाचार माध्यमहरुमा जनाईएअनुसार, इरानका ८० वर्षीय अमो हाजीले ६० वर्षयता नुहाएका छैनन् । त्यही ६० वर्षदेखि ननुहाएर उनि विश्वकै सवैभन्दा फोहरी व्यक्ति बनेका छन् । अमो हाजी अजिव तरिकाले जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् । २० वर्षको हुँदा नुहाउन छाडेका उनले ६० वर्षदेखि शरीरमा एक थोपा पनि पानी पर्न दिएका छैनन् । नुहाएमा आफू विरामी पर्ने उनको दावी छ । उनी आफ्नो खाना र पिउने पानी पनि कहिल्यै सफा राख्दैनन् । उनी जनावरका सडेगलेका मासु खाने गर्छन् भने पानी पनि फोहर नै पिउँछन् । जब उनको कपाल लामो हुन्छ उनी काट्नुको साटो जलाउँछन् । उनको शरीरमा बश्त्र पनि कहिल्यै सफा हुँदैन । चिसोबा...
सुन्दा अच्चम लाग्ला ! जन्मदिनमा कुखुराको शानदार पार्टी
Uncategorized, अचम्मका कुरा
काठमाडौं । सुन्दा अच्चम लाग्ला तर जन्मदिनमा कुखुराको शानदार पार्टी गरिएको छ । भारतको कर्नाटकस्थित बेलगाम जिल्लामा एक परिवारले आफ्नो घरमा एक कुखुरा पालेको थियो । त्यो कुखुरा उनीहरुकै घरमा जन्मिएको थियो । उसको जन्मदिनमा परिसवारले दमदार पार्टी राखेका छन । कुखुराको नाम वीरु र शेरु रहेको छ । उनीहरुको जन्मदिनको दिन मानिसको जसरी नै केक काटिके थिए । आजको संसारमा मानिसहरु जीवजनावरहरुलाई धेरै प्रेम गर्ने गर्छन् । कोहि त आफ्नो जीवनसाथी समेत जजनावरलाई बनाउँछन् । अहिले सोसल मिडियामा एउटा समाचार भाइरल बनिरहेको छ । ...
अचम्मका कुरा, जिवनसैली, टिप्स, समाज
काठमाडौँ, पुष ११ प्रायः पुरुषहरुले सोच्छन्, आफ्नी प्रेमिका वा पत्नीलाई कसरी खुसी राख्ने, के भन्दा उनी खुसी हुन्छिन् ? प्रायले बुझेको एउटा तरिका तारिफ नै हो । तपाईंले जति तारिफ गर्नुभए पनि उनीहरुलाई त्यो कम नै हुन्छ । आज हामी तपाईंलाई महिलाहरुले आफ्नो पार्टनरबाट सुन्न चाहने ५ वटा कुरा जानकारी दिँदैछौं । १. तिमी निकै राम्री छौ । २. आई लभ यू ३. तिमी मेरो जिन्दगीमा आउने पहिलो र अन्तिम महिला हौ । ४. तिमी मेरो प्रेमिका/पत्नीमात्रै होइन, सबैभन्दा राम्रो साथी हौ । ५. म भाग्यमानी हुँ, किनकी मेरो साथमा तिमी छौ । यी ५ कुरा जति सुनेपनि उनीहरुलाई कम नै हुन्छ । आफ्नो जीवनसाथीबाट यस्तो कुरा सुन्न पाउँदा उनीहरुमा खुसीको कुनै सीमा नै हुँदैन ।...
Dec252020 by China RegmiNo Comments
काठमाडौं । तपाईको किबोर्डमा भएका कि का बारेमा बारेमा तपाईलाई केकति जानकारी छ ? नियमित रुपमा ल्यापटप तथा डेक्सटपमा तपाईले आफनो काम गरिरहनु भएकै छ । तर, तपाईले प्रयोग गर्ने किबोर्डमा रहेका बटनले के काम गर्छ ? तिनीहरुको प्रयोग के कसरी गर्न सकन्छि भन्ने बारेमा तपाईले कत्तिको विचार गर्नुभएको छ रु वा जानकारी लिने प्रयास नै गर्नुभएको छैन ? यदि छैन भने आज हामी तपाईलाई ती बटनको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्छौ । कि बोर्डको माथि शिरानामा रहेका एफ १ देखि एफ १२ सम्मका बटनको फरक फरक काम गर्छन् । ती सबै बटनको आ आफै काम हुन्छन् र तिनले हामीलाई सहज रुपमा आफनो दैनिक काम गर्नमद्दत गरिरहेका हुन्छन् । एक फूल साइज किबोर्डमा १०१ देखि लिएर १०५ वटासम्म कि रहेका हुन्छन् । तर, ल्यापटपमा भने केही कम मात्रामा कि रहन्छन् । किबोर्ड जति नै छोटो भएपनि त्यसमा उत्तिकै मात्रामा महत्वपूर्ण अल्फाबेटका साथ आवश्यक क...
Dec242020 by Dipesh NeupaneNo Comments
अचम्मका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय, मनोरञ्जन
काठमाडौं , पुस ९ राजाकी गर्लफ्रेण्डका १ हजार ४ सय फोटो देशैभरी छ्याप्छ्याप्ती भएपछि अहिले थाइल्याण्डमा हंगामा भएको छ । आफ्नी गर्लफ्रेण्डका फोटो लिक भएपछि राजा महा बाजीरालंकर्ण तनावमा परेका छन् । राजाकी गर्लफ्रेण्ड सिनिनित वोंगवाजीरापकडीका दुश्मनहरुले उनका यति धेरै नग्न फोटोहरु त्यहाँका राजतन्त्रविरोधी अभियन्ताहरुलाई पठाएको द टाइम्सको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै डेलीमेलले जनाएको छ । रिपोर्टका अनुसार पठाइएका फोटोहरुमध्ये ठूलो संख्यामा फोटोहरु नग्न छन् । रिपोर्टअनुसार सिनिनितका नग्न फोटोहरु थाइल्याण्डमा राजशाहीविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिरहेका अभियन्ताहरुलाई पठाइएको छ । यी फोटोहरु २०१२ देखि २०१४ को बीचमा खिचिएको बताइएको छ । स्वयं सिनिनितले नै ती तस्वीर खिचेको अनुमान गरिएको छ । थाइल्याण्डको राजशाहीको आलोचक रहेका बेलायती पत्रकार म्याकग्रेगर मार्शललाई पनि यी तस्वीरहरु पठाइएको छ । ...